ထိုင်းဘုန်းကြီးတွေ ဦးဆောင်တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု
03 မေ၊ 2020
ပလတ်စတစ်အမှိုက် ကင်းစင်ရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ Lamphun မြို့ Pa Book ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ဒေသခံအချို့။
ထိုင်းနိုင်ငံ Lamphun မြို့ Pa Book ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဘုန်းတော်ကြီးတွေ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မြေကမ္ဘာနေ့ကို ဘယ်လိုပုံစံ လိုက်နာ ဆင်နွှဲကြပါသလဲ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း လျှော့ချတဲ့နည်းနဲ့ မနက်ခင်းတိုင်း ဆွမ်းခံကြွကြတာဖြစ်ပြီး Pa Book ရွာကိုလည်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမရှိတဲ့ စံပြရွာတခုအဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီးတွေက ပြောင်းလဲလိုက်တာပါ။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် Warangkana Chomchuem သတင်းပေးပို့ထားတာကို မသိင်္ဂီထိုက် တင်ပြပေးထားပါတယ်။
Pa Book ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက ပလတ်စတစ်နဲ့ အစားအသောက် လေလွင့်မှု လုံးဝမရှိစေရေး သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကတည်းက ရည်မှန်းချက်ချခဲ့တာပါ။ ဆွမ်းနဲ့ ဆွမ်းဟင်းတွေကို ပန်းကန်လုံးနဲ့ထည့်ပြီး သယ်ယူတာကြောင့် ပလတ်စတစ်ဘူးတွေ သုံးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Pa Book ကျောင်းက လက်ထောက် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် Pra Samutnatthee က အခုလို မိန့်ပါတယ်။
“အစားအသောက် လေလွင့်မှု နည်းသွားသလို တနှစ်ကို ပလတ်စတစ်အိတ် ၇,၀၀၀ လောက် သုံးစရာလည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့။”
နှစ်စဉ် အနည်းဆုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်း တန်ချိန် ၂၇ သန်းလောက်ရှိပြီး အဲဒီထဲမှာ ပလတ်စတစ် စွန့်ပစ်မှုက တန်ချိန် ၂ သန်းလောက်ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်တော့ Pa Book ဘုန်းကြီးကျောင်းက စံပြတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပလတ်စတစ်နဲ့ အဆင်သင့် ထုပ်ပိုးပေးတဲ့ ချက်ပြုတ်ပြီးသား ဒါမှမဟုတ်လည်း အသင့်စားတွေကို ၀ယ်ပြီး ဆွမ်းလောင်းလေ့ ရှိကြတဲ့အတွက် ပထမတော့ လူတွေက ပလတ်စတစ်မသုံးဖို့ ဆိုတာကို လက်မခံကြပါဘူး။ ဒါကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲခဲ့ရလဲ ဆိုတာကို Pa Book ကျောင်းက ဒုတိယကျောင်းထိုင် Pra Samutnatthee က အခုလို မိန့်ပါတယ်။
“ဆွမ်းခံကြွချိန်ကို တနာရီ နောက်ဆုတ်ပြီး မနက် ၇ နာရီမှ သူတို့ မနက်စာ ချက်ပြီးချိန်ရောက်မှ ဆွမ်းခံပါတယ်။ ပလတ်စတစ် မသုံးဖို့လည်း အားလုံးကို ပြောထားပြီးသားပါ။ တယောက်ယောက်က ပလတ်စတစ်နဲ့ထုပ်ပြီး ဆွမ်းလောင်းရင်လည်း တခြားလူတွေက ပလတ်စတစ် မသုံးတော့ဘူးလို့ ၀ိုင်းပြီး ပြောကြပါတယ်။”
ဘုန်းကြီးကျောင်းကစတဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ကင်းစင်ရေး ဦးဆောင် လမ်းပြမှုကြောင့်ပဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ Pa Book ဒေသခံတွေ စပြီး အမှိုက်ရှင်းခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ စားကြွင်းစားကျန်တွေကို မြေသြဇာလုပ်ပါတယ်။ ပလတ်စတစ်နဲ့ ဖန်ထည်တွေကိုလည်း ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေသခံတဦးဖြစ်တဲ့ Saisupan Maneekan က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ရတာ အဆင်ပြေတယ်၊ ရွှေ့ရ ပြောင်းရ လွယ်ပါတယ်။”
Pa Book ရွာက အမှိုက်ကင်းစင်တဲ့ စံပြရွာဖြစ်ပြီး အမျိုးသားအဆင့် ဆုတံဆိပ်တွေလည်းရ၊ နောက် အမှိုက်ကင်းစင်ရေးကို လာလေ့လာသူကလည်း သောင်းနဲ့ချီ ရှိပါတယ်။ ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sanan Somchan က အခုလို ပြောပါတယ်။
“လူတိုင်းက ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ် တာဝန်ယူလိုက်တော့ အမှိုက်လိုက်သိမ်းစရာ မလိုတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီအခြေအနေကို ထိန်းထားနိုင်မလား။ ဒုတိယ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး Pra Samutnatthee က….
“ဘုန်းကြီးတွေပြောတာကို လူတွေက နားထောင်ကြလို့ ဘုန်းကြီးတွေက အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု တခုတည်းတင် မဟုတ်ဘဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ အလေးထား စောင့်ရှောက်ပါတယ်” လို့ မိန့်ကြားသွားပါတယ်။
ထိုငျးဘုနျးကွီးတှေ ဦးဆောငျတဲ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေး လှုပျရှားမှု
ထိုငျးနိုငျငံ Lamphun မွို့ Pa Book ဘုနျးကွီးကြောငျးက ဘုနျးတျောကွီးတှေ နစေ့ဉျနတေို့ငျး မွကေမ်ဘာနကေို့ ဘယျလိုပုံစံ လိုကျနာ ဆငျနှဲကွပါသလဲ။ စှနျ့ပဈပစ်စညျး လြှော့ခတြဲ့နညျးနဲ့ မနကျခငျးတိုငျး ဆှမျးခံကွှကွတာဖွဈပွီး Pa Book ရှာကိုလညျး စှနျ့ပဈပစ်စညျးမရှိတဲ့ စံပွရှာတခုအဖွဈ ဘုနျးတျောကွီးတှကေ ပွောငျးလဲလိုကျတာပါ။ ဒီအကွောငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ ဗှီအိုအသေတငျးထောကျ Warangkana Chomchuem သတငျးပေးပို့ထားတာကို မသိင်ျဂီထိုကျ တငျပွပေးထားပါတယျ။
Pa Book ကြောငျးမှာ သီတငျးသုံးတဲ့ ဘုနျးကွီးတှကေ ပလတျစတဈနဲ့ အစားအသောကျ လလှေငျ့မှု လုံးဝမရှိစရေေး သူတို့ကိုယျတိုငျ ဆောငျရှကျဖို့ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ ၂၀ ကတညျးက ရညျမှနျးခကျြခခြဲ့တာပါ။ ဆှမျးနဲ့ ဆှမျးဟငျးတှကေို ပနျးကနျလုံးနဲ့ထညျ့ပွီး သယျယူတာကွောငျ့ ပလတျစတဈဘူးတှေ သုံးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Pa Book ကြောငျးက လကျထောကျ ကြောငျးထိုငျဆရာတျော Pra Samutnatthee က အခုလို မိနျ့ပါတယျ။
“အစားအသောကျ လလှေငျ့မှု နညျးသှားသလို တနှဈကို ပလတျစတဈအိတျ ၇,၀၀၀ လောကျ သုံးစရာလညျး မလိုတော့ဘူးပေါ့။”
နှဈစဉျ အနညျးဆုံး စှနျ့ပဈပစ်စညျး တနျခြိနျ ၂၇ သနျးလောကျရှိပွီး အဲဒီထဲမှာ ပလတျစတဈ စှနျ့ပဈမှုက တနျခြိနျ ၂ သနျးလောကျရှိတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံအတှကျတော့ Pa Book ဘုနျးကွီးကြောငျးက စံပွတခု ဖွဈပါတယျ။ ပလတျစတဈနဲ့ အဆငျသငျ့ ထုပျပိုးပေးတဲ့ ခကျြပွုတျပွီးသား ဒါမှမဟုတျလညျး အသငျ့စားတှကေို ဝယျပွီး ဆှမျးလောငျးလေ့ ရှိကွတဲ့အတှကျ ပထမတော့ လူတှကေ ပလတျစတဈမသုံးဖို့ ဆိုတာကို လကျမခံကွပါဘူး။ ဒါကို ဘယျလိုပွောငျးလဲခဲ့ရလဲ ဆိုတာကို Pa Book ကြောငျးက ဒုတိယကြောငျးထိုငျ Pra Samutnatthee က အခုလို မိနျ့ပါတယျ။
“ဆှမျးခံကွှခြိနျကို တနာရီ နောကျဆုတျပွီး မနကျ ၇ နာရီမှ သူတို့ မနကျစာ ခကျြပွီးခြိနျရောကျမှ ဆှမျးခံပါတယျ။ ပလတျစတဈ မသုံးဖို့လညျး အားလုံးကို ပွောထားပွီးသားပါ။ တယောကျယောကျက ပလတျစတဈနဲ့ထုပျပွီး ဆှမျးလောငျးရငျလညျး တခွားလူတှကေ ပလတျစတဈ မသုံးတော့ဘူးလို့ ဝိုငျးပွီး ပွောကွပါတယျ။”
ဘုနျးကွီးကြောငျးကစတဲ့ စှနျ့ပဈပစ်စညျး ကငျးစငျရေး ဦးဆောငျ လမျးပွမှုကွောငျ့ပဲ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ Pa Book ဒသေခံတှေ စပွီး အမှိုကျရှငျးခဲ့ကွပွီးပါပွီ။ စားကွှငျးစားကနျြတှကေို မွသွေဇာလုပျပါတယျ။ ပလတျစတဈနဲ့ ဖနျထညျတှကေိုလညျး ပွနျလညျအသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ ဒသေခံတဦးဖွဈတဲ့ Saisupan Maneekan က အခုလို ပွောပါတယျ။
“ဟငျးသီးဟငျးရှကျစိုကျရတာ အဆငျပွတေယျ၊ ရှရေ့ ပွောငျးရ လှယျပါတယျ။”
Pa Book ရှာက အမှိုကျကငျးစငျတဲ့ စံပွရှာဖွဈပွီး အမြိုးသားအဆငျ့ ဆုတံဆိပျတှလေညျးရ၊ နောကျ အမှိုကျကငျးစငျရေးကို လာလလေ့ာသူကလညျး သောငျးနဲ့ခြီ ရှိပါတယျ။ ရှာအုပျခြုပျရေးမှူး Sanan Somchan က အခုလို ပွောပါတယျ။
“လူတိုငျးက ကိုယျ့အမှိုကျကိုယျ တာဝနျယူလိုကျတော့ အမှိုကျလိုကျသိမျးစရာ မလိုတော့တာ ဖွဈပါတယျ။”
ဒီအခွအေနကေို ထိနျးထားနိုငျမလား။ ဒုတိယ ကြောငျးထိုငျဘုနျးကွီး Pra Samutnatthee က….
“ဘုနျးကွီးတှပွေောတာကို လူတှကေ နားထောငျကွလို့ ဘုနျးကွီးတှကေ အရေးကွီးပါတယျ။ ကိုးကှယျယုံကွညျမှု တခုတညျးတငျ မဟုတျဘဲ သဘာဝပတျဝနျးကငျြကိုပါ ဘုနျးကွီးတို့အနနေဲ့ အလေးထား စောငျ့ရှောကျပါတယျ” လို့ မိနျ့ကွားသှားပါတယျ။
Geneva မိုးနဲ့ အိမ်ထဲက သီချင်းဆိုကြသူများ